Ungawahlanganisa kanjani amabhulukwe omshado | Amadoda aSitayela
Ungaligqoka kanjani iphenti emshadweni
U-Alicia tomero | | imfashini, Amathrendi
Ukukhathazeka ukugqoka kahle Kungumqondo osuvele ukhulisa izikhundla emkhakheni wabesilisa. Kuthola abalandeli kuzo zonke izitayela futhi ngomshado umqondo ungaba ngonembeza omkhulu, uma umqondo uzophelela, ungalahli imininingwane ku ukuhlanganisa kanjani amabhulukwe emshadweni.
Yize ibhulukwe lingabalulekile, liyasebenza impela, ngoba mhlawumbe kuyingubo lapho inzalo encane ikhokhelwa ukugqoka kahle futhi ngobuhle. Sihlala sizibeka ngehembe, uthayi, ivesti noma ibhantshi, kepha amabhulukwe ayingxenye yalezi zingubo futhi sizolinika ukugqama namuhla.
1 Yazi eminye imininingwane ngaphambi kokuya emshadweni
2 Ungawahlukanisa kanjani amabhulukwe
3 Uhlobo lwamabhulukwe omshado
4 Hlanganisa amabhulukwe omshado kuye ngesenzakalo
4.1 Amabhulukwe emishado yosuku
4.2 Ibhulukwe lemishado yakusihlwa
Yazi eminye imininingwane ngaphambi kokuya emshadweni
Uchungechunge lwezinto ezibalulekile kumele lubhekwe, umqondo ukwazi kusengaphambili ukuthi umshado ungakuphi futhi nini. Imishado eminingi isivele ibeka indlela yokugqoka izivakashi okufanele izigqoke futhi lokho kuzokunika inzuzo encane kunalokho okufanele ukugqoke.
Uma umshado ungekho emthethweni kakhulu kuyadingeka ukwazi indawo lapho izobanjelwa khona (indawo evaliwe noma evulekile), indawo lapho ihlelwe khona ndawonye isimo sezulu sakho nesikhathi somcimbi. Kubalulekile ukwazi ngale mininingwane yokugcina ukuthi ngabe umshado uzoba imini noma ubusuku.
Ungawahlukanisa kanjani amabhulukwe
Manje cishe zonke izitolo zinewebhusayithi yazo. Kuyinkomba enhle ye- ukwazi ukuthenga, yini esemakethe futhi ngamanani entengo. Lokhu sekuvele kuyinzuzo ebekwe lapho uthenga nokuthi yini ongakuqhathanisa. Ngenkathi ubona kunamakhasi amaningi lapho ungakhetha khona umkhiqizo wabo futhi ubone ukubuyekeza kwabo, ngale ndlela ungabona ukuthi ukuthengwa kulungile yini.
Ukubuyekeza kwakho nombono wakho kuzokwenzeka lapho ukhetha ibhulukwe, ngoba ukuphawula akukwazi ukuthanda nokuqonda kabi usayizi, indwangu noma umbala. Kodwa-ke, ungakhohliswa ukubuyekeza okukodwa, umuntu ngamunye uhlukile futhi kungenzeka akhona imibono emihle eminingi lokho kuphikisana nokubi. Ngezinye izikhathi, lowo mkhiqizo ungahle ungabi nomsebenzi omningi wokuthenga futhi usibekelwe abanye ngezeluleko zokuthenga.
Kumanani ayo, kuyisihloko esinzima ukuphikisana. Kukhona amanani azo zonke izabelomali, kepha kusukela ekubukeni kokufunayo kungcono ukulahla imali ethe xaxa uthenge ikhwalithi. Izikhathi eziningi uthenga into eshibhile kakhulu futhi ekugcineni uthenga futhi ngentengo ephindwe kabili noma ephindwe kathathu. Kungcono ukusebenzisa imali ethe xaxa, sikujabulele isikhathi eside futhi ukusebenzisa ezinye izaphulelo akulimazi.
Uhlobo lwamabhulukwe omshado
Uhlobo lwamabhulukwe kulo mcimbi njalo ine-cut efanayo, ngaphandle kokungabaza kufanele kube amabhulukwe amade hhayi amafushane. Uhlale njalo ekhetha amabhulukwe okugqoka, kufushane eqakaleni nangeziquququ ezingangatshazwa (okukodwa noma kabili) kubuthene okhalweni. Lesi sitayela sakhula ngemfashini yaseJapane yasemadolobheni futhi sesifinyelele emakamelweni ethu okufakwa njenge amabhulukwe amahle.
Enye imininingwane ukuthi ibonakala ngokuthola okhalweni oluphakeme, ukweqa amabhulukwe ngenhla kwenkaba. Ngenkathi singakwazisa kuzosikhumbuza amabhulukwe ayesetshenziswa esikhathini esedlule ekhabethe elihle lesiNgisi nesiFulentshi.
Hlanganisa amabhulukwe omshado kuye ngesenzakalo
Ngokuvamile, uhlobo lwamabhulukwe oluvame ukusetshenziselwa imikhosi lukhona imibala engathathi hlangothi futhi emnyama futhi bahlala behamba ngobuningi babo beya kumajakhethi. Kungokushaya kuphela ithoni yohlobo lomkhosi, ngoba konke kuzoncika esikhathini sosuku nendawo.
Amabhulukwe emishado yosuku
para imishado ebanjwa emini amabhulukwe ngokuvamile ahamba kangcono ngawo imibala enamathoni akhanyayo, njengempunga, umhlaba noma okuluhlaza okwesibhakabhaka okukhanyayo. Yize futhi yamukela imibala engathathi hlangothi efana ne-tan.
Uma umshado ugujwa olwandle kufanele ukhethe ibhulukwe nge Indwangu epholile futhi evulekile emibala engathathi hlangothi ngakho-ke azimunci konke ukushisa. Uma umgubho u ebusuku, impela okuhle kakhulu imibala imnyama, kusuka ku-navy blue, amalahle ampunga noma mnyama.
Kwezinye izinhlobo zemishado yosuku nosuku izindawo ezivulekile njengensimu, ungakhetha imibala emnyama ezihamba ngokungafani namahembe anemibala ekhanyayo. Isudi emnyama ejwayelekile enehembe elimhlophe futhi ingekho ivesti engasetshenziswa, noma uma ufuna umthunzi okhanyayo, kungasetshenziswa isudi empunga yamalahle. Enye inketho ukusebenzisa umbala ompunga okhanyayo ukuphrojusa olunye uhlobo lwesithombe esisemthethweni, kepha hhayi mnyama kangako.
Ibhulukwe lemishado yakusihlwa
Kokunye umkhosi wasebusuku amasudi anamabhulukwe agqokwe kakhulu yilezo umbala omnyama noma imibala emnyama ezifana namalahle ampunga, oxford grey, noma omnyama oluhlaza okwesibhakabhaka. Konke lokhu kungaba hlanganisa nehembe elimhlophe nezicathulo zethoni efanayo noma lokho kuqhathanisa.
I-tuxedo Akungabazeki ukuthi ithandwa kakhulu emishadweni yasebusuku. Zinhle kakhulu futhi ziyinkimbinkimbi, cishe njalo okumnyama futhi kufanele kugqokwe ngehembe elimhlophe, iqina, intamo ephelele futhi ngaphandle kokungabaza kwayo uthayi omnyama omnyama. Elinye iqiniso eliphawulekayo ukuthi amabhulukwe anemininingwane emincane: kufanele abe neribhoni le-satin ebanzi engu-2 cm eceleni.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Ungaligqoka kanjani iphenti emshadweni
Kusho ukuthini uma engibuka angimamatheke?
Uma ungangithandi, kungani ungibuka kangaka?